Sida loo Cusbooneysiiyo Xiaomi kahor qofkasta oo leh Pi Pilot | Androidsis
Marka waad cusbooneysiin kartaa Xiaomi qof kale kahor
Soo saaraha Aasiya wuxuu ku guuleystey inuu boos ka helo qaybta isagoo soo bandhigaya taleefannada gacanta oo leh qiimo aan laga adkaan karin oo lacag ah. Iyo, waa inaad fiirisaa moodooyinka ugu dambeeyay ee lasoo bandhigay, sida cajiib ah Xiaomi CC9 Pro, si loo xaqiijiyo shaqada weyn ee weyn ee Shiinaha. Ma haysaa mid ka mid ah moodooyinkooda? Waxaan ku tusaynaa sida cusbooneysii Xiaomi qof ka hor.
Dhamaan taleefanada shirkada fadhigeedu yahay Beijing waxay leeyihiin MIUI, Xiaomi isbadalkeeda gaarka ah ee keydka taleefannada casriga ah oo loo arko inuu yahay midka ugu fiican suuqa. Ma rabtaa inaad tijaabiso nooca ugu dambeeya? Thanks to My Pilot waad heli kartaa.
1 Pilot-kayga, barnaamijka soosaaraha si loo cusbooneysiiyo Xiaomi-kaaga sida ugu dhakhsaha badan
1.1 Telefoonada Xiaomi / Redmi ee la jaan qaada Mi Pilot
Pilot-kayga, barnaamijka soosaaraha si loo cusbooneysiiyo Xiaomi-kaaga sida ugu dhakhsaha badan
Mid ka mid ah dhibcaha xun ee shirkadda weyn ee Shiinaha, sida shirkadaha ugu badan ee waaxda, ayaa ah siyaasadeeda cusbooneysiinta xun. In kastoo, waxay umuuqataa inaan ugu dambeyntii cusbooneysiin karno Xiaomi-ka si ka dhakhso badan sidii hore. Dhamaan waad ku mahadsantahay My Pilot, barnaamijka tijaabada cusub ee u oggolaan doona boosteejooyinka qaarkood ee astaanta Shiinaha in la cusbooneysiiyo sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaad dhahdaa howsha aad isqorto Duuliyahayagii iyo inaad awood u leedahay inaad cusboonaysiiso Xiaomi-kaaga qof kale kahor waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad marin u hesho foomkan diiwaangelinta oo aad gelisaa xogta koontadaada Xiaomi. Raac talaabooyinka waxaadna sugeysaa inta xaqiijintu imaaneyso. Laga bilaabo xilligaas wixii ka dambeeya, waxaad heli doontaa barnaamijyada beta MIUI beta waqtiga kahor. Dabcan, waa noocyo tijaabo ah, markaa waxaad kaheli kartaa guuldarro gaar ah, laakiin waa qiimo yar oo lagu bixiyo beddelkeeda inaad ku raaxeysan karto warka weyn ee MIUI
Ugu dambeyntiina, waxaannu kuu daynaynaa liistooyinka leh tusaalooyinka loo xaqiijiyay barnaamijka My Pilot. Taleefoonkaagu miyaanu ku jirin iyaga? Waxba ma dhacaan, tijaabi nasiibkaaga oo iska qor si kasta, laga yaabee inaad sidoo kale cusbooneysiin karto Xiaomi si ka dhakhso badan intaad filayso.
Telefoonada Xiaomi / Redmi ee la jaan qaada Mi Pilot
Redmi Xusuusin Pro
Redmi Notes 6 Pro
Redmi Xusuusin 5 Pro India / Redmi Note 5 Global
Redmi Xusuusin 5 Hindiya / Redmi 5 Plus Global
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Marka waad cusbooneysiin kartaa Xiaomi qof kale kahor
loogu talagalay xiaomi redmi note 7
Jawaab Salvador Hernández Nuñez
Qaabeynta ugu fiican ee Nova Launcher. (Fikrad shaqsiyeed)